Fotoana famakiana: 6 minitra Ny kaontinanta Eoropeana dia be fanta-daza noho ny mahatalanjona sy matsiro sokola. Raha ny tena izy, chocoholics maro izay tia mandeha milaza fa izy ireo dia nanana fahafahana miavaka ny sasany hanandrana tsirony nandritra ny diany. Raha toa ianao ka manao ny làlanao amin'ny alalan'ny Eoropa sy mankafy sokola, isika…
Nandeha lamasinina, Train Travel Austria, Train Travel Belzika, Fiaran-dalamby Travel Denmark, Fiaran-dalamby Frantsa, Fiaran-dalamby Alemana, Fiaran-dalamby Hongria, ...
Fotoana famakiana: 5 minitra Eoropa no tsara indrindra ho an'ny tantaram-pitiavana toerana tanàna getaway. Na izany aza, dia toerana lehibe, ary mety te-tery izany teo. Soa ihany, be dia be ny toy momba ny Alemaina, indrindra fa ny tantaram-pitiavana sy ny zana-bohiny tanàna. Nahoana raha ny havanao…
Fotoana famakiana: 4 minitra Eoropa no tena tsara toerana fihaonana maro samy hafa kolontsaina - ary culinary fomba amam-panao. Firenena rehetra manana ny mampiavaka, izay mitaona ny mpitsidika tsara ho amin'ny tantara sy ny zavatra hafa rehetra izany manome. Ary ny any amin'ny tany sasany, izany dia midika ihany koa flavorful zava-pisotro! Those of…